I-asparagus ebhakwe ngeqanda elosiweyo kunye neparmesan | Ukupheka kweKhitshi
I-asparagus ebhaka kunye neqanda elibiweyo kunye noshizi
Namhlanje siphakamisa enye iresiphi elula yokuqhubeka nokonwabela ihlobo ngaphandle kokuzibandakanya ekhitshini: I-asparagus ebhaka kunye neqanda elosiweyo netshizi egreyithiweyo. Ndiyazi ukuba siyakuphepha ukuvula i-oveni ehlotyeni, kodwa yintoni imizuzu eyi-10? Ukubuya, uya kufumana ipleyiti entle egcwele umbala.
Sisitya onokukwazi khonza isidlo sakusasa, ukuqala usuku njengamandla, okanye kwisidlo sangokuhlwa njengesindululo sokukhanya. Ixesha lokuhambisa le asparagus ebhakaweyo ixhomekeke kuwe; Ndizilinganisela ekunikezeleni izitshixo ukuze ukwazi ukuziphumeza ngaphandle kwengxaki.
I-asparagus ebhaka kunye neqanda elibiweyo kunye netshizi egayiweyo yeParmesan inokuhanjiswa kwisidlo sakusasa okanye isidlo sangokuhlwa.
1 iqela leasparagus yasendle
Iipuniwe ezi-2 zesisa ezigayiweyo zeshizi yeParmesan
Sitshisa i-oven kwi-180 ° C.
Silayini itreyi ngephepha lokubhaka kwaye ubeke i-asparagus ecocekileyo neyomileyo kuyo.
Sigalela i-drizzle yeoli kwi-asparagus kunye nexesha lokungcamla
Sibhaka phakathi kwemizuzu eli-10 ukuya kweli-15, kuxhomekeke kubukhulu be-asparagus.
Ngelixa, siqhotsa amaqanda. Xa zenziwe, ngaphandle kobushushu, zifafaze ngeshizi kwaye zigqume ipani ukuze itshizi inyibilike ngobushushu obuyintsalela.
Sibeka amaqanda kwi-asparagus, sifafaze itshizi encinci kwaye sisebenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » I-asparagus ebhaka kunye neqanda elibiweyo kunye noshizi
I-French omelette kunye nesandwich yeapile
IMacaroni enenyama egayiweyo kunye ne-eggplant